Ny filoha lefitra Apple dia te-hitondra ny lakileny sy ny poketrany amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Tony Cortes | | maro
Ny hany zavatra tsara ilaozan'ny areti-mifindra mahafaly anay dia ny efa ahafahanao mandoa amin'ny carte de crédit NFC na aiza na aiza. Ao amin'ny trano fisotroana, fivarotan-mofo, gregerrocers, tobin-tsolika, eny fa na amin'ny milina fivarotana aza dia azonao atao mandoa amin'ny Apple Watch, na dia vola mampihomehy aza izy ireo. Amin'ity fomba ity dia hialantsika ny fikasihana ireo vola madinika sy faktiora.
Raha mivoaka mamaky ny tanànako mandeha aho, mitondra ny Apple Watch LTE Ampy ny karamako any amin'ny fivarotana rehetra, na raha misakafo maraina ao anaty bara aho. Ary raha raisiko ny fiara, miaraka amin'ny fakako ny iPhone izay ametrahako ny app DGT Amin'ny fahazoan-dàlana hitondra fiara, dia ampy ho ahy izany. Elaela ny elakeliko dia nandao ny vatasarihana latabatra teo am-pandriana ... Eny, mandainga aho: noraisiko haka ny fatra roa amin'ny vaksinina.
Nandritra ny fihaonambe eran-tany ho an'ny mpamorona eran'izao tontolo izao, Apple dia naneho ny iray amin'ireo fiasa nangatahina indrindra ho an'ny rindrambaiko Wallet: fanohanana an'i fahazoan-dàlana hamily. Amin'ny iOS 15 sy watchOS 8 dia efa azo atao izany. Mijanona ho an'ny fitondram-panjakana isaky ny firenena ihany no manome alalana azy.
kevin lynch, Ny filoha lefitra misahana ny haitao an'ny Apple, manara-maso ny ankamaroan'ny fivoaran'ny Apple Watch, ary vao tsy ela akory izay no nanao dinidinika Yahoo Finance. Tao anatin'io no niresahany momba ny smartwatch an'i Apple sy ny fanohanany ny fahazoan-dàlana hamily sy ny lakilen'ny varavarana. Nilaza i Lynch fa tsy ho ela dia handeha tsy hanana kitapom-batsy sy tsy hanana lakile isika, miaraka amin'ny Apple Watch ihany.
Ary tsy raisina lavitra. Ny fahazoan-dàlan'ny mpamily dia azo ampidirina ao amin'ny rindrambaiko Wallet toy ny Visa rehetra mifanentana aminy, fotoana fohy fotsiny io. Azonao atao ny manokatra fiara mifanentana aminy Lakilen'ny fiara, dia efa zava-misy.
Ary ny hidin-trano varavarana marani-tsaina mifanentana amin'ny HomeKit Apple's na Amazon's Alexa, efa misy eny an-tsena ihany koa izy ireo. Ka i Apple dia efa nametraka ny fototr'izany rehetra izany mba ho lasa zava-misy. Mijanona ho an'ny orinasa fahatelo (fitantanan-draharaham-panjakana sy mpanamboatra fiara) ihany no hiditra amin'ireo fandrosoana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny filoha lefitra Apple dia te hihazona ny lakileny sy ny poketrany amin'ny Apple Watch
Pixelmator Pro 2.1 navoaka ho an'ny macOS miaraka amin'ny vaovao mahaliana